Injineeradii Turkiga ee ku dhaawacmey qarixii Afgooye oo la qaadey – Radio Baidoa
Garoonka Diyaaradaha Aadan-Cadde ee Magaalada Muqdisho waxaa saakay soo gaartay diyaarad ka timid dalka turkiga,taas oo qaadey dhaawacyada Shaqaalihii Turkiga ee qaraxa lagula beegsaday Afgooye.
Dhaawacyada oo gaarayay Sagaal ayaa kala ah Seddex Turki ah iyo lix Sooomaali ah,waxaana maalmahaan xaaladooda caafimaad lagu baxnaaninayey Isbitaalka Urgugaan Ex-Digfeer ee Magaalada Muqdisho,waxaana sidoo kale lala qaadey askar ka tirsan Ciidamada dowladda oo la dhaawacmey.
Shaqaalaha Turkiga oo u Shaqeynayey shirkadda dhiseysa Wadada xiriirisa Muqdisho & Afgooye ayaa waxaa 18-kii Bishaan qarax ismiidaamin ah lagula beegsadey Bar koontarool oo ku taalla Degmada Afgooye,waxaana qaraxaasi dhimasho iyo dhaawac ku noqdey askar iyo dad Shacab ah.
Ra’iisul Wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali kheyre ayaa habeen ka hor waxaa uu Isbitaalka Urdugaan ku booqdey dhaawacyada Injineerada iyo askarta,waxaana uu sidoo kale la kulmay Madaxda Shirkadda Enez, Seracettin Aksun oo ah tan dhiseysa Wadada Muqdisho & Afgooye,isaga oo u balan qaadey in amnigooda la sugi doono.
Shuruudaha laga rabo Musharaxiinta Madaxweynaha Galmudug iyo ku xigeenkiisa oo la shaaciyay